Iindaba -Ingxoxo ye-Mid-Autumn yokuFunda kwabafundi beKholeji ngo-2020
Ngo-Septemba wama-29, ngo-2020 iJitai Electronics Co., Ltd yabamba iMid-Autumn Coversazione yomfundi wasekholejini ngo-2020 yenye yezinto ezilungileyo kwinkampani yam kwaye inika nethuba lokukhula ngokwabo abathi bajoyine inkampani. Okwangoku likwaqonga lomntu wonke ukuba aziphathe kakuhle (yena). Bebonke abafundi beekholeji abangama-40 abasuka kumasebe ahlukeneyo abathathe inxaxheba kwi-Mid-Autumn Conversazione.
Umxholo wale ntlanganiso uzimisele kwizimvo ezivela kuJack Ma, umseki weAlibaba "quotient yeemvakalelo, quotient yolwazi, quotient yolonwabo" kunye "nemvakalelo ethatha isigqibo ngekamva" "imeko ithatha isigqibo". Abafundi beekholeji kwinkampani yethu benza uluvo ngokusekwe kukuqonda kwabo.
Ababekho kule ncoko bayithatha ngokungathí sina kwaye benza amalungiselelo apheleleyo ngakumbi abafundi abancinci beekholeji kwaye bagqabaza olwakhe uluvo ngesibindi. Zonke izimvo ziye zavavanywa yinkampani ngokulula nje njengesiseko sokwabiwa kwemisebenzi, ukunyuselwa imivuzo, ukhetho oluphambili kunye nokudalwa okugqwesileyo.
Kufuphi nasekupheleni kwengxoxo, uJun Ma, usihlalo wenkampani yethu wenza isigqibo sokuba ukuthengiswa kweemarike zangaphandle ngo-2020 kwakuphantsi kokulunga, ubungakanani be-odolo babanele, kodwa inkampani yethu yayixakeke yimisebenzi enzima kwaye ijongene nobunzima kunye nemiceli mngeni ndandi nqwenela bonke abasebenzi abadala kunye nabafundi abatsha beekholeji baqhubeka nokudlala iitalente zakho kwaye besebenzisa ulwazi kunye namava nge-enthusatism epheleleyo yomsebenzi kwaye baqhubeka nokwenza isitayile esisebenzayo sokuthatha imiba enameva kwaye unamathele kwinjongo yakho kwaye ungavumeli ukuhamba ukukhawulezisa ukufezekisa injongo yemveliso Inkampani yethu kwi2020 ngemizamo kunye nokuzabalaza. Kwangelo xesha ndininqwenelela nonke iiholide ezimnandi nosapho olonwabileyo. Ekugqibeleni uyathemba ukuba wonke umntu unokufumana inkqubela phambili kunye nenkqubela phambili kwinkampani.
Ngale ngxoxo, hayi kuphela abafundi abancinci beekholeji zokuphicothana, ukuphucula iimvakalelo zomntu weqonga, kodwa ukonyusa ukuzithemba kwabo kunye nokuzimisela kwabo ukuthatha ingcambu kwinkampani.